बलिरहेको बत्ति निभाएर किन चाणक्यले बाले अर्को बत्ति ?
त्यतिबेला सम्राट चन्द्रगुप्तको शासन भारत बर्षमा चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । यसको एक मात्र कारण चन्द्रगुप्तका महामन्त्री चाणक्यको कुशल शासन व्यवस्थाका थियो । त्यस बेला चिनीयाँ यात्रीहरु चन्द्रगुप्तको राज्यमा आउने जाने गरिरहन्थे । अनि त्यस अवसरमा उनीहरु ती कुशल चाणक्यलाई भेट्न पनि निकै लालायित हुन्थे । त्यस्तै यात्राको क्रममा चिनीयाँ यात्रीहरु मध्येका एक इतिहास प्रसिद्ध यात्री ह्वेनशाङ पनि चन्द्रगुप्तको साम्राज्यको यात्रा गर्न जाँदा चाणक्य बसेको कुनै एकान्त कुटिमा उनलाई भेट्न पुगे । महामन्त्री चाणक्यको कुटी निकै साधारण थियो । ह्वेनशाङ पुग्दा चाणक्य भने टुकी बालेर एकाग्रतापूर्वक केही लेखिरहेका थिए । ह्वेनशाङ पुगिसकेपछि पनि चाणक्य केही लेखि नै रहे । अनि ह्वेनशाङ भने चुपचाप उनले लेखेको हेरेर बसिरहे ।
केही क्षणपछि चाणक्यले आफ्नो काम सकेर पाहुनालाई स्वागत गरे । उनलाई यसरी स्वागत गर्दै गर्दा चाणक्यले बलिरहेको बत्ति निभाएर अर्को बत्ति बाले । त्यो देखेर ह्वेनशाङ आश्चर्य मान्दै हेरिरहेका थिए । पहिलो बत्ती निभाएर बालिएको दोश्रो बत्तीको मन्द प्रकाशमा अब चाणक्यले अतिथि चिनीयाँ यात्री ह्वेनशाङसँग हार्दिक कुराकानी गर्न गर्न थाले —‘भन्नुस् तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो देश ? चाणक्यको प्रश्न सुनेर ह्वेनशाङले मुक्कुराउँदै र खुशी हुँदै जवाफदिए ‘राम्रो, अत्यन्तै भव्य लाग्यो तपाईको देश ।’
यसरी ती दुइ देशका दुइ जना मित्रहरुले विभिन्न विषयमा कुरा गरिरहे । तर ह्वेनशाङलार्ई भने मनमा के लागि रहेको थियो भने चाणक्यले ‘किन उनी पुग्दा बलिरहेको त्यो बत्ति निभाएर यो अर्को बत्ती बालेका होलान् ? अन्तमा चाणक्यलाई उनले सोधे,‘तपाई अघि म यहाँ अर्कै बत्ति बालेर लेखिरहनु भएको थियो । म आएपछि तपाईले त्यो बत्ती निभाएर यो अर्को बत्ती बाल्नु भयो किन ?
यो ह्वेनशाङको प्रश्न सुनेर चाणक्यले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, ‘मित्र, तपाईको प्रश्नको जवाफ एकदमै साधारण छ । तपाई आउनु भन्दा अगाडि म देशको शासन सम्बन्धि काम गरिरहेको थिएँ । राज्यको काम गर्न मैले राज्यकोषको बत्ति बालेँ । त्यो बत्तीको खर्च राज्यकोषबाट हुन्छ । त्यसपछि तपाई आउँनु भयो । तपाईसँग भेटघाट कुराकानी गर्नु मेरो निजी काम हो । त्यसकारण मैले राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भनेर आफ्नै खर्चको यो अर्को बत्ती बालेँ ।’चाणक्यको यो कुरा सुनेर ह्वेनशाङ दंग परे । सकेसम्म राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर सात पुस्तालाई कमाउन रमाउने हाम्रो भ्रष्ट नेतृत्वलाई भने ‘चाणक्य—ह्वेनशाङको यो ऐतिहासिक सम्वाद’को कुरा सुन्दा पनि तिनको मन तर्सिदो होला !
नेपालका सडक : निर्माणपूर्व अनुसन्धान नहुनु मूख्य समस्या - विज्ञहरु
महिलाको साख बढेको हो त सम्पन्न अमेरिकी निर्बाचनमा ?
सही अर्थ के हो धर्म निरपेक्षताको ?